Zvikamu zvesimbi - Mestech Industrial Limited
Simbi simbi masimbi mabhuroko, simbi miseve, simbi machira, simbi goko, nezvimwe. izvo zvakagadzirwa nesimbi zvinhu.
Zvishandiso zvesimbi zvikamu: simbi uye zvisina simbi simbi (kana simbi isiri-feri). Simbi ine yakanakisa zvivakwa izvo zvisiri-zvesimbi zvinhu senge mapurasitiki, huni, fiber uye zvichingodaro, izvo zvisingadzoreke mune zvigadzirwa zveindasitiri
1.Yakanakisa kuitisa, inoshandiswa kugadzira zvikamu zvinofambisa, senge mota rotor, magetsi switch, socket.
2. Zvakanaka kupisa kupisa, zvinogona kushandiswa kugadzira kupisa kupisa zvikamu pamushini zvishandiso, senge kupisa singi, injini blade, nezvimwe.
3. Mapurasitiki akanaka, anogona kuve epurasitiki deformation yesimbi zvinhu, kugadzira muchina zvikamu zvemhando dzakasiyana.
4. Kugadzikana kwakanaka.
5. Midziyo yesimbi ine yakakwira michini zvivakwa, yakasimba simba uye kuomarara.
6. Iyo simbi ine yakanyanya kusungunuka nzvimbo uye inogona kuve nekwanisi kune yakanyanya tembiricha yekushanda nharaunda.
7. Zvikamu zvesimbi zvinogona kuwana kunaka kwekuenzana uye yepamusoro pehunhu, izvo zvinowanzoshandiswa kugadzira zvikamu zvemuchina chaiwo.
Simbi simbi dzinoshandiswa zvakanyanya mumishini yekushandisa, zvigadzirwa zvemagetsi, kuvaka ngarava, kubhururuka uye midziyo yemumba. Idzo simbi dzatinoitira vatengi vedu dzinotevera: Shaft, giya, kufa kukanda, sintering, sheet simbi
Stainless simbi zvikamu
Nemazvo simbi zvikamu
Aluminium kufa zvikamu zvakakandwa
Zingi chiwanikwa ufe chakakandirwa zvikamu
Kugadziridza tekinoroji yesimbi zvikamu machine, tsikwa, kunyatso kukanda, upfu simbi, simbi jekiseni kuumbwa, laser machining, EDM, ultrasonic machining, electrochemical machine, chidimbu danda machining uye ultra-yakakwira kumhanya machining. Zvakafanana nekutendeuka, kugaya, kugadzira, kukanda, kukuya, CNC machining, CNC CNC CNC nzvimbo iri kugadzira machira akajairika.
Surface kurapwa maitiro
1. Anti ngura uye anti rust kurapwa: kubirisa dema uye kufashaira bhuruu kunonziwo phosphating kurapwa, kuitira kuti simbi zvikamu zvine ngura kuramba uye ngura kuramba.
2. Kuomesa kurapwa: iyo nzira yekurapa yekuwedzera kuomarara kwezvikamu zvesimbi: pamusoro carburization inogamuchirwa kuti iwedzere pamusoro pekuomarara kwenzvimbo dzesimbi, uye pamusoro pevara rinozoita nhema mushure me carburizing; kupedza kurapwa kunogona kuwedzera kuoma;
3. Kuchenesa kupisa kurapwa kunogona kunatsiridza kuwanda kweukukutu.
Mestech inopa vatengi dhizaini uye kugadzirisa kwesimbi zvikamu, aluminium alloy, mhangura chiwanikwa, zinc alloy uye zvimwe simbi zvikamu. Kana uine zvigadzirwa zvesimbi uye zvikamu zvekutenga, ndapota taura nesu.